Ejiri Igwe Igwe nke 88 88: Isi, Nkọwapụta Akụkụ na Ntuziaka maka Jiri - Incubator - 2020
Egger 88 egg incubator nnyocha
Ihe dị iche iche nke oge a na-agụnye ma obere ngwaọrụ ejikere maka iwepụ obere batrị nke ọkụkọ, na ụdị mmepụta nke nwere ihe ruru mkpụrụ ego 16,000. Ejiri Egger 88 bụ onye na-emepụta ngwa ngwa nke Russia maka ntakịrị ugbo ala na ugbo nke onwe ya ma mepụtara maka mwepụ nke 88 ọkụkọ. Nke a bụ ezigbo ihe ngwọta maka ndị na-adịghị mkpa ụdị nnukwu na ọnụ.
Ihe eji emepụta
Ọrụ mmepụta ihe
Ntuziaka maka iji ngwa
Na-akwadebe incubator maka ọrụ
Ndị na-akpọ Hatching
Egger 88 bụ ngwa ngwa ntinye nke nwere ike ịrụnye n'ime ụlọ ọ bụla nwere okpomọkụ n'elu 16 Celsius na iru mmiri adịghị ala karịa 50%. Ezubere maka ozuzu ulo ozuzu - ọkụkọ, turkeys, ducks, hawks, geese, quail.
Ndị oru ugbo ulo ozuzu ulo oru ndi oru ugbo na ndi oru uzo di oke ruru oru so na ihe omuma.
A na - eji ngwaọrụ ndị dị elu na ngwá electronic rụọ ngwaọrụ ahụ, na - eburu n'uche ngwọta nkà na ụzụ nke oge a n'ọhịa ụmụ chickching. Arụmọrụ nke ngwaọrụ ahụ na-adabere na ngwa arụmọrụ.
The incubator sitere na ngwaọrụ nke ụdị - ọ nwere ike ịrụ ọrụ nke tupu incubation na ụlọ ndozi. Iji tọghata onye na-eme ka ọ bụrụ onye na-ebugharị ya, ọ ga-ezuru àkwá ndị ahụ na trays ndị dị n'ime ala nke ụlọ ahụ. Mgbe akwa akwa, ngwaọrụ ahụ na-arụ ọrụ n'ọnọdụ akpaka. A na-ejikwa ihe mgbaàmà pụrụ iche na-achịkwa ma gbanwee nkeji.
Lelee ihe ndị ọkachamara nke ụlọ ndị dị ka "Egger 264", "Kvochka", "Nest 200", "Sovatutto 24", "Ryabushka 70", "TGB 280", "Universal 55", "Stimul-4000", " AI-48 "," Stimul-1000 "," Mpịpị IP-16 "," IFH 500 "," IPH 1000 "," Remil 550TsD "," Covatutto 108 "," Titan "," Cinderella "," Janoel 24 " , "Neptune".
Egger 88 nwere ọrụ nile nke ọkachamara ọkachamara:
usoro nhazi nke okpomọkụ na iru mmiri;
na-edebe ihe ndị a setịpụrụ;
nnweta nsụgharị akwa àkwá;
nnukwu ventilashion, ikpo ọkụ na usoro nhicha.
N'otu oge ahụ enwere ike iji ya na onye ọrụ ugbo na ụlọ. Uru nke ngwaọrụ ahụ:
echiche eche echiche;
akwa ike arụmọrụ;
ndozi ngwa ngwa;
Ị ma? A na-ewere Egypt oge ochie dị ka ebe a mụrụ ebe nchekwa osisi. Herodotus dere ihe banyere ngwaọrụ ndị a n'oge njem na Ijipt. Ọbụna ugbu a, na nso Cairo, e nwere incubator, nke dị afọ 2000.
The incubator adịghị ewepụta ọtụtụ ohere ma jiri ihe dị ka kilogram 8. Nzukọ nke incubator - Russian, site na mmiri dị iche iche. Onye na-emepụta ihe nwere oge ịgba akwụkwọ, ire ere na ndị ahịa na ọnụahịa ndị na-ere ahịa. Oge imecha maka nnata nke akụkụ ndị dị mkpa - ụbọchị ole na ole, dabere na mpaghara nke nnyefe.
Foto: Egger 88 Incubator Review
The incubator mejupụtara:
incubation trays - 4 pcs.;
usoro kpo oku;
usoro nhicha di elu na bat nke 9 lita mmiri.
Iji kpalie incubator, e nwere 3 aka na mkpuchi na mgbidi. Iji nwee ike ịmalite ime ụlọ ahụ n'ime ụlọ ahụ, a na-akwadebe ihe nlereanya ahụ na tebụl pụrụ iche nke dabara na ala ụgha, ọ na-ere nsen. Ihe mkpuchi na mgbidi n'akụkụ nke Egger 88 na-agwụcha na obere vidiyo.
Ogo nke ihe nlereanya ahụ bụ 76 x 34 x 60 cm. A na - emepụta ya na profaịlụ aluminom na sandwich panels nke nwere mmiri nke 24 mm. A na-eji okpukpu PVC eme ihe na Sanwichi, n'etiti nke enwere mkpuchi - polyam. Njirimara nke ụlọ:
elu-elu kwesiri mkpuchi (ọ bụghị ihe na-erughị 0.9 m2 ° C / W);
ezigbo mkpuchi mkpuchi (ọbụlagodi 24 dB);
akwa mmiri eguzogide;
ezigbo nguzogide na-emetụ aka na mmetụta nkwụsị
Ngwaọrụ na-arụ ọrụ site na igwe nwere voltage nke 220 V. Ikuku oriri adịghị karịa 190 V n'oge oku.
Anyị na-adụ gị ọdụ ka ị gụọ banyere otu esi họrọ ezigbo ụlọ incubator.
Ejiri ihe ndozi bu:
88 àkwá ọkụkọ;
Video: New Developments for Egger 88 Incubator
Isi ihe nke igwe elekere bu onye ndu. Ọ na-arụ ọrụ:
ventilashọn nke ozo;
ụzọ mberede nke ventilashion.
A pụrụ ịgbanwe ihu mmiri n'ime unit ahụ site na 40 ruo 80% na nzi ezi nke 1%. A na-enye mmiri mmiri site na ikuku mmiri, nke a na-enye site na tankị pụrụ iche.
Gụkwuo banyere otu esi eme ka incubator jiri onwe gị si na friji, thermostat, ovoscope na ventilashị maka incubator.
Ike - 9 lita; o zuru ezu iji nye akara njikwa nke oke maka 4-6 ụbọchị, dabere na akara akaebe. Nọgide na-enwe okpomọkụ ikuku - ruo 39 Celsius. Ndozi nke ziri ezi - gbakwunyere ma ọ bụ na-erughị 0.1 Celsius.
Arụmọrụ kachasị maka nsen anụ ọkụkọ:
iru mmiri - 55%;
okpomọkụ - 37 Celsius C.
Ọ dị mkpa! N'ime oge mmechi ahụ, okpomọkụ nke ikuku dịgasị iche - site na 38 ° C n'ụbọchị mbụ ruo 37 ° C na njedebe nke oge ahụ. Ma iru mmiri nwere oge pụrụ iche: na mbido na mgbe usoro ahụ, ọ bụ 50-55%, na ụbọchị atọ tupu ọgwụgwụ ahụ, ọ ga-abụ ihe na-erughị 65-70%.
A na-emegharị nke trays mechanically. Usoro n'ime igbe ahụ na-agagharị mgbe nile wee jiri nwayọ gbanwee. N'ime awa 2, a na-agbagharị trays 90 degrees site n'otu akụkụ gaa na nke ọzọ.
Fans nọ na mpaghara ala nke ntinye ahụ, ha na-eburu ikuku site na ụlọ wee wepu ya. N'elu ụlọ ahụ, ikuku na-eme ka ikuku. N'ịnọ n'ihu onye fanyere iche maka ịcha igwefoto na oge, nke a ga-eji mee ihe karịa isi na ọnọdụ mberede.
Uru nke Egger 88 gụnyere:
enwere ike ibunye àkwá nke ụdị anụ ọkụkọ dị iche iche;
nchikota oru nke incubation na excretory ngwaọrụ;
mfe nke na-agbanwe ihe nlereanya ahụ na ohere nke ịkwanye na obere ohere;
nkwenye nke ihe nkedo nke nsen;
ezi kwes mkpuchi ihe onwunwe;
kachasị njikwa nke usoro: ịchịkwa ventilashion, iru mmiri, okpomọkụ, ntụgharị nke akpaka;
mmetụta dị elu nke na-eguzogide ahụ;
siri ike imewe, ikpokọta si elu-edu components;
ogo na ogo nke ihe owuwu ahụ, mepụtara na-echebara echiche nke ndị injinia abụọ na ndị ọrụ ugbo ulo ozuzu ọkụ;
nchịkọta dị mfe iji nọgide na-elekọta ma nọgide na-enwe.
Enweghi ike itinye ngwaọrụ a dị ka obere ikike ya na arụmọrụ dị ntakịrị, ma ihe a nile kwekọrọ na nzube ya: otu obere kọmpụta maka obere ọrụ ugbo.
Egger 88 nwere ike itinye n'ime ime ụlọ nke ikuku ikuku adịghị ala karịa 18 Celsius. Ọdịdị dị na ntụpọ nke sandwich nke ụlọ ahụ na-ejikọta GOST 7076. A chọrọ ikuku dị n'ime ụlọ ahụ nke nwere incubator, ebe ọ bụ na ọ na-ekere òkè n'ime usoro mgbanwe nke ikuku n'ime ụlọ ndozi. Adịnyela unit n'ime ihe ma ọ bụ na ìhè anyanwụ.
Ị ma? Nestlings nke eze albatross aba ogologo oge karịa nnụnụ ndị ọzọ - ha chọrọ ụbọchị 80 tupu a mụọ ha.
Nkwadebe na incubation gunyere ihe ndi ozo nke oru na akpo:
Na-akwadebe ngwaọrụ ịrụ ọrụ.
Doo akwa na incubator.
Ihe nchịkwa bụ isi bụ incubation.
Ngwá ọrụ nke igwefoto maka iwepụ nke chicks.
Usoro mkpocha nke chick.
Nlekọta nke ngwaọrụ mgbe ịdọrọ.
Maka ịmepụta ọkụkọ na-aga nke ọma, ma e wezụga onye incubator, ọ dịkwa mma inwe:
ngalaba ike ike na-adịghị agwụ agwụ;
0.8 kW generator.
Nchịkọta nke oge a nwere ike ịbụ mmanụ dizel, gasoline ma ọ bụ gas. Onye na-emepụta ihe ga-echebe gị site na nkwụsịtụ omume na ọrụ nke ike grid. Ogwe ike ọkpọka a na-apụghị igbochi egbochi abụghị ihe dị mkpa, ma a na-atụ aro ya iji kpuchie ngwá electronic site na ntanetị ọkụ eletrik ma jiri ya mee ka voltages kacha elu.
Tupu ọrụ ị chọrọ:
Na-asa ngwa ahụ na mmiri na-esi na ya na sponge maka ikpochapu ahụ, disinfect, akọrọ.
Lelee ọnọdụ nke ụdọ ike na nkwado nke ikpe ahụ. A machibidoro ike iji ihe arụ arụ.
Jupụta usoro nhichaa mmiri na mmiri ọkụ.
Jikọta incubator n'ime ọrụ.
Lelee ọrụ nke usoro ntụgharị.
Lelee usoro nke ikuku ventilashion, ikuku na ikpo iru mmiri.
Lezienụ anya maka nzipụta nke ọgụgụ isi na ntinye ha na ezigbo ụkpụrụ.
Ọ bụrụ na enwere nsogbu na arụmọrụ nke usoro - kpọtụrụ ụlọ ọrụ.
Dụnye trays maka ụdị ụdị nsen (ọkụkọ, ọbọgwụ, quail).
Gụkwuo gbasara ikpochapu incubator tupu ịtọba àkwá, otu esi kpochapu ma saa nsen tupu incubation, otu esi etinye akwa na incubator.
Ngwa maka nsen:
Maka incubation na-ehicha, àkwá a na-akwaghị akwa nke otu nha.
Nsen ga-enwere ntụpọ (nkedo dị mkpa, ụlọ ikuku na-agbanwe agbanwe, wdg.) - nke a na-ahụ anya.
Nri ohuru - ọ gafeghi ụbọchị 10 site na oge ịtọ.
Echekwa ya na okpomọkụ nke dị ala karịa 10 Celsius.
Tupu itinye nsen na incubator, kpoo ha ka ha nwee okpomọkụ na 25 Celsius. Mgbe àkwá na-etinye n'àkwà, a na-emechi mkpuchi ma na-edozi akụkụ nke Egger 88. A ghaghị idozi okpomọkụ (37-38 ° C), iru mmiri (50-55%) na oge ikuku ventilation.
Video: na-akwadebe nsen maka ịtọba na incubator Ugbu a ị nwere ike mechie incubator ma gbanye ya. Mgbe ahụ ị ga-achọ ijide n'aka na ngwaọrụ ahụ na-arụ ọrụ na ọnọdụ a kapịrị ọnụ. Ọ bụrụ na nsị nke àkwá dị iche iche, mgbe ahụ ọ dị mkpa ka ị tụlee na a gaghị ajụ akwa dị otú ahụ n'ihi na ha dị oké ọnụ ahịa.
Ọ dị mkpa! Ọdịiche dị n'etiti okpomọkụ nke àkwá na okpomọkụ dị n'ime ụlọ nwere ike iduga nchịkọta condensate, nke na-enye aka na mmepe nke ụmụ nje na ebu.
Mgbe a na-emetọ shells, a na-efopụ ájá dị mma. A na-etinye àkwá nsị maka mgbakwasị na mgbede - nke mere ka usoro ịkụkọ ọkụkọ malite n'isi ụtụtụ na nwa dum nwere oge iji wepu ehihie.
Na usoro nke incubation chọrọ nlekota oge nke usoro - iru mmiri, okpomọkụ, ikuku, na-agbanwe nsen. A na-atụ aro ka ịlele ọrụ ọ dịkarịa ala ugboro abụọ n'ụbọchị - n'ụtụtụ na n'ehihie. Ọ bụrụ na ị na-esi na okpomọkụ na-emekarị, ọ na-ekwe omume ka ọgba aghara na mmepe nke oge oyiri. Imebi na mmiri mmiri na-eduga na ndim nke shei, nke ọkụkọ ahụ agaghị enwe ike imeri. Ke adianade do, ke ikuku ikuku, ọkụkọ bụ obere. Nnukwu ikuku iru ala nwere ike ime ka ọkụkọ ahụ na-arapara n'osisi.
ọkụkọ - 19-21;
quails - 15-17;
Ugwu - 28-33;
geese - 28-30;
Ị ma? Ọ bụrụ na ịkwesịrị ịdaba na incubation na-erughị nha nha, buru ụzọ dina buru ibu (karịa 60 g), mgbe ọ gachara 4-5 awa na obere oge 7-8. Nke a ga-eme ka usoro ịzụlite otu oge.
A na-eji akwa ovoscope eme ihe nyocha kwa oge - ugboro 2-3 kwa oge.
3-4 ụbọchị tupu njedebe nke incubation, àkwá si na incubation trays na-tọrọ na tebụl pụrụ iche na ala ụgha nke ụlọ. Idoba àkwá na oge a ka amachibidoro. Ọkụ ọkụ na-amalite na nke onwe ya.
Mgbe ọkụkọ ahụ kpochapụrụ - ọ ghaghị ịkọ tupu e wepụ ya na incubator n'ime nri anụ ụlọ. A ghaghị wepụ ọkụkọ dị ọkụ ma na-arụsi ọrụ ike, n'ihi na ọ ga-egbochi ndị ọzọ chicks si hatching.
Chọpụta ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ọkụkọ enweghị ike ịcha.
Ọ bụrụ na usoro a egbu oge ma ọ bụ naanị akụkụ nke ọkụkọ na-egbu egbu, nke ọzọ ejidela - mee ka okpomọkụ dị n'ime ụlọ dị na 0,5 Celsius, nke a ga-eme ngwa ngwa.
Nsogbu na nsogbu ndị nwere ike ime:
Ọkụ ahụ agbajila na shea, ọ na-ebuli nwayọọ, ma ọ pụtaghị ruo ọtụtụ awa. Ụdị ọkụkọ dị otú ahụ na-ewepụta oge iji pụọ. Ọ na-adịghị ike ma na-apụ nwayọọ nwayọọ.
Mkpụrụ ọkụ ahụ agbajiri shea ahụ, ọ pụtaghị ma na-egbu ya. Eleghi anya ure ahụ akpọnwụla ma ghara ikwe ka ọ pụọ. Ghichaa aka gị na mmiri, wepụ akwa ahụ ma jiri nwayọọ gwuo mmiri. Nke a ga-enyere nwa ahụ aka.
Ọ bụrụ na otu mpekere na-adabere na ọkụkọ ahọrọ, jiri mmiri mee ka ọ dị ọcha na mmiri ka o wee daa.
Ọ dị mkpa! Ị pụghị iji aka gị gbalịa wepu shea. Ị nwere ike imebi ọkụkọ na mberede.
Mgbe umu chicks gbasiri, a na-ewepu ya. A na-ewepụkwa ihe ndị ahụ na-asacha ma saa ya na ngwọta. A na-asachakwa ụlọ a na-etinye ihe na-esi ísì mmiri na mmiri ncha na disinfected.
Egger Price bụ 88,000 rubles.
The Egger 88 Incubator nwere ezigbo price / quality ruru na klas ya. Ụdị njirimara na ogo nke arụmọrụ na-adaba na analogues mmepụta ihe. Ngwaọrụ a na-ahụ maka ọdịdị nke oge a, ịdabere nke components, nnukwu ike arụmọrụ. Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla ị nwere ike ịnweta ndụmọdụ site na ụlọ ọrụ ọrụ ụlọ ọrụ.
Ngwunye nke ụmụ anụmanụ na-eto eto bụ ụzọ dị mma maka ịzụ anụ ọkụkọ, Egger 88 ga-enyere gị aka ịnagide ọrụ a. Enweghi ihe ndi ozo yiri maka ugbo nke obere ugbo ma nwee ike ime ya.
Zuru ezu nkọwa na foto nke mkpụrụ vaịn "Nadezhda Aksayskaya"
Amachi orchids - ot'o ole ka osisi ahu na ndu na uzo esi eme ka odi ndu?
A osisi pụrụ iche - Voloshsky dil. Njirimara nke fennel mkpụrụ na bara uru bara uru maka ngwa
"Ugbo ala n'ubi": onu ogugu na nke oma
Anyị na-akụ kọlịflawa na seedlings
Kedu uru na nsogbu nke chicory